I-Mobile Led Trailer
Iloli le-Mobile Led
I-Led Stage Truck
I-VMS Traic Trailer
I-Solar Mobile Led Trailer
Ukuhlaziywa Kafushane Kwezizathu Ezenza Izimoto Zokukhangisa Zeselula ze-LED Zidume Emakethe
Uma kukhulunywa ngemoto yokukhangisa ye-LED, abantu abaningi abaxakile. Isakaza emigwaqweni ngendlela yesibonisi semoto se-LED. Ngokusho kokusetshenziswa eminyakeni yamuva nje, inokuthandwa kwemakethe ephezulu futhi ingadunyiswa kakhulu ngabasebenzisi. Kungani idumile futhi ithandwa...
Ukuhlaziywa Kwemakethe Yebhizinisi Lokuqasha Izimoto Ze-LED Media
Imoto yemidiya ye-LED yaziwa njengesizukulwane sesine samandla aluhlaza. Isetshenziswa kabanzi emkhakheni wokuxhumana nokukhangisa. Abathengisi abaqashisa ngezimoto ze-LED media bathi izimoto ze-LED media ngobuhlakani zihlanganisa isikrini esikhulu nezimoto. Ifomu lokugqwayiza levidiyo enezinhlangothi ezintathu ...
Imoto Yesiteji Esihamba Phambili - Ihambisana Nawe Ngokumangalisayo
Ngokuthuthukisa impilo yabantu yespare time, izimoto zasesiteji ezingomahamba nendlwana seziqhamuke buthule. Imoto yasesiteji engumahamba-nendlwana ayifaki nje intshisekelo ethile empilweni yabantu eyisicefe, kodwa futhi...
Amanye amathiphu okusetshenziswa kwansuku zonke nokugcinwa kweloli lokukhangisa
Sekusondele ekupheleni konyaka omusha. Ngalesi sikhathi, ukuthengiswa kweloli lokukhangisa kuthandwa kakhulu. Izinkampani eziningi zifuna ukusebenzisa iloli lokukhangisa ukuze zidayise imikhiqizo yazo. Lesi sigwebo sifinyelele umvuthwandaba wokuthengisa oshisayo wamaloli okukhangisa. Abangane abaningi aba...
Izinga lezimoto zokukhangisa ezihambayo zangaphandle lincike ekukhethweni kwazo zonke izingxenye ezibalulekile
Izimoto zokukhangisa ezihambayo zangaphandle zaziwa abantu abaningi. Lapho abantu abaningi bethenga lo mkhiqizo, banaka kakhulu izinga lemoto yokukhangisa, futhi ikhwalithi yemoto yokukhangisa incike ekukhethweni kwalo lonke iqembu elingukhiye, bese-ke lapha Yini abayinaka...
Izimoto zokukhangisa ze-Mobile LED zinezinzuzo ongazazi
Imoto yokukhangisa ye-Mobile LED iyisisetshenziswa sokukhangisa sangaphandle esisetshenziswa kabanzi njengamanje. Isebenzisa izinto ezahlukahlukene zokukhangisa ezinjengomsindo nokugqwayiza ukukhuthaza ukukhangisa. Enqubweni yokukhangisa ngamaselula, idonsa ukunaka kwamalungelo abantu. Nasi isifinyezo senzuzo...
Imoto yokukhangisa ye-Jingchuan ikunikeza indlela engabizi kakhulu yokuhlangana
Ekusakazweni kokukhangisa kwangaphandle, ukusetshenziswa kwezimoto zokukhangisa sekuphenduke inkambiso, kodwa noma kunjalo, amakhasimende amaningi azolinda futhi abone imakethe yezimoto zokukhangisa. Yiluphi uhla olujwayelekile lokukhangisa...
Ukukhangisa Imoto Ephathwayo Ibamba iqhaza Emqhudelwaneni Wemidiya Yangaphandle
Izinsiza zemidiya yangaphandle kulula ukuba mnyama ngakho lezi zinkampani zichitha usuku lonke zifuna izinsiza ezintsha zemidiya. Ukuvela kwezimoto zeselula ezikhangisa nge-LED kunikeza izinkampani zemidiya yangaphandle ithemba elisha. Kuthiwani ngokukhangisa izimoto eziphathwayo? Asi...
Ukuhlukaniswa kwezibonisi ze-LED ezifakwe emotweni
Ngokuthuthuka okusheshayo kwesibonisi se-LED, isibonisi se-LED esifakwe emotweni siyavela. Uma kuqhathaniswa nokujwayelekile, okungaguquki futhi okungakwazi ukuhambisa isibonisi se-LED, sinezidingo eziphakeme ekuzinzeni, ekulweni nokuphazamiseka, e-shockproof nezinye izici.Indlela yayo yokuhlukanisa nayo ihlukile ngokuya ngezinhlobonhlobo...
Ukulungiswa okusebenzayo kwendlela enhle ye-trailer ye-LED
Ngokubonisa okujwayelekile kwe-LED yemikhiqizo ye-elekthronikhi, i-trailer ye-LED emotweni yeselula yangaphandle uma isetshenziswa endaweni, isikhathi sokugijima, njll, zonke zinezinkinga eziyinkimbinkimbi, ngakho-ke ezisetshenziswayo azidingi nje ukunaka ukusetshenziswa kwamakhono, kodwa futhi zidinga kaningi. ukulungiswa kwe-trailer ye-LED, ingasebenza...
I-2021 JCT eyenziwe ngokwezifiso ye-LED yemoto yomphakathi yokuqala
Ayanda amabhizinisi afake “izinkonzo zemisebenzi yokuziphilisa yabantu” emisebenzini yawo ebalulekile, efana nezinkampani zamandla kagesi nezishisayo, izimboni zamanzi kanye namanye amabhizinisi ahlobene nokudla kwabantu, izingubo zokugqoka, izindlu nezokuthutha. Isevisi ye-JCT LED...
Ukwenza isinqumo sokuthenga imoto yokukhangisa ye-LED ngemuva kokuqonda inkampani ye-Jingchuan(JCT)
Ngokuthuthuka komphakathi, imithombo yezindaba iye yanda kakhulu, kusukela ephephandabeni lendabuko, kancane kancane yathuthukiswa yaba amapheshana, omakhalekhukhwini, amakhompyutha….Ukukhangisa kwangaphandle sekungene kuzo zonke izici zokuphila kwethu. Abantu sebesukile ekwamukelweni okusebenzayo baya kancane...
Ukuhlaziywa Kafushane Kwezizathu Ezenza I-LED M...
Ukuhlaziywa Kwemakethe Yezimoto Zemidiya ye-LED R...
I-Led Mobile Truck Iyathengiswa, Ukukhangisa Kwamaloli, Isibonisi Se-LED Yewindi Lasemuva, I-Led Mobile Truck, Isikrini Esiholelekile Semoto, Ukukhangisa kwe-Billboard yamaloli,